Timaha casriga ee ragga | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Timaha
Timaha timaha ee ragga ayaa isbedela sannadihii la soo dhaafay iyo imaatinka moodooyin iyo isbeddello cusub, waa inaan is cusboonaysiinno haddii aan dooneyno inaan yeelano qaab wanaagsan. Qodobkaan waxaan uga hadlaynaa timaha casriga ah ee ragga 2018. Waxaan la kulanay timo udhaxeeya mid gaaban iyo mid adag oo dhaadheer oo qasan. Waxaan soo mari doonaa timo jaraha waxaanan kuu sheegi doonaa xuduudaha qaabdhismeedka ee loo isticmaalay abuurista timaha iyo timaha ugu casrisan.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay yihiin timaha casriga ah ee ragga 2018? Sii wad akhriska oo wax badan ayaad ogaan doontaa.
1 Isbedelka timaha timaha 2018
2 Timaha ugu wanaagsan ee timaha loogu talagalay ragga 2018
2.1 Timo jare
2.2 Maqaarka oo yaraada
2.3 Timo jarista
2.4 Baangado qoraal ah
Isbedelka timaha timaha 2018
Waana in timo jaristu ay noqon karto kumanaan siyaabood. Mid waliba wuxuu leeyahay qaabkiisa calaamadeysan wuxuuna ku siin karaa farqi weyn inta kale. Waxay waliba shakhsiyan u keenaan qofka xidhan. Qofka leh timo jareer ah oo aan dan ka lahayn la mid ma aha midka kale ee ka shaqo badan. Haddii aad rabto inaad tijaabiso qaar ka mid ah isbeddellada 2018, ma ahan goor dambe.
Timo jar kastaa waxay keeneysaa wax gaar ah qaar badan oo ka mid ahna waxay u baahan yihiin alaabooyinka saxda ah ee timaha u habboon. Haye ragga, timo gaaban ayaa had iyo jeer noqon doona kuwa ugu caansan. Dhawaan Dhex-dhexaad iyo timo dhaadheer oo dhaadheer ayaa si aad ah loogu fadilay. Ragga wey kori karaan timahooda banaanka waxayna xiran karaan suuf faux leh oo leh timo gaaban ama dhexdhexaad ah. Tani waxay kordhisaa kala duwanaanta iyo kala duwanaanta timaha.
Mid ka mid ah jeexitaannada loo arko inay soo noqnoqdeen bilihii la soo dhaafay ayaa ah ka tagista qayb ka mid ah timaha dhaadheer ee kor ku xusan iyo xiirashada dhinacyada. Si kastaba ha noqotee, hoos-u-dhiska qoraalka badan, fringes, fades, undercut, trim, iyo qaababka kale ee caadiga ah ayaa si fiican ugu habboon timaha ragga casriga ah. Qeybta ugu wanaagsan ee tan oo dhan waa in dusha sare uu ku guuleystey inuu ka soo baxo qaababka kale sidaas darteed, waxay u shaqeeyaan dhammaan noocyada timaha, qaababka iyo dhererka. Gaar ahaan, Wiilasha timaha qaro leh, duufaanka badan iyo kuwa lugaha leh kuma degdegi doonaan helitaanka timo muuqaal leh oo la xidho.
Timaha ugu wanaagsan ee timaha loogu talagalay ragga 2018
Sidii aan horey u soo sheegnay, xulashada timo dhaadheer, mid dhexdhexaad ah ama gaagaaban waxay wax weyn ka bedeli kartaa qaabka shaqsiyeed ee qofka. Timo jarista gaagaaban way fududahay in la ilaaliyo lana ilaaliyo qaabka muddada-dheer ah. Waxay si dhib leh ugu baahan yihiin wax soo saar yar Hadaad ubaahantahay xirfad raadin shaqo iyo voila. Noocyada dhaadheer waa sida moodada iyo soo jiidashada leh.
In kasta oo lagula taliyay in dhallinyartu cimilo ka helaan ama dhinacyada ka hoos galaan, in badan oo ka mid ahi waxay doorbidayaan jarista maqaska oo ay ku dhammaadaan cajaladdu. Marka xigta, waxaan mid mid u arki doonnaa timo casri ah oo loogu talagalay ragga waxaana hubaal ah inuu jiri doono mid ku habboon dookhaaga. Eeg qaar ka mid ah qaababka timo jarista ee ugu quruxda badan uguna quruxda badan si aad ugu haboonaato dhammaan dhererka iyo noocyada timaha.
Goos gooska libdhi waa muuqaal casri ah oo sii wadaya inuu caan ku noqdo. Sifada ayaa ah inay ku qeexayso timahan timo tartiib tartiib tartiib ah dhererka timaha. Dhinaca hoose ee madaxa, timuhu si tartiib tartiib ah ayey u gaabiyeen oo xitaa waxay ku libdhi karaan maqaarka. Sidaa awgeed magaca gradient.
Waxaa jira kala duwanaansho badan oo timo jaban oo ragga ah. Ereybixintu waa wax yar oo wareer ah, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan u caddayno sida ugu macquulsan.
Wixii gooyay Fade waxaa jira laba nooc: sare iyo hoose. Timo jarista sare ee timaha waa qaab isbarbardhiga sare iyo qaab kacsan. Ku bilaw sare dhinacyada iyo dhabarka. Timaha ayaa si tartiib tartiib ah u taabanaya qoorta.
Dhinaca kale, gradient-ka hoose wuxuu ka bilaabmaa cidhifyada jarista iyo khadka timaha, wax yar ka sarreeya dhegaha. Koorta ayaa si dirqi ah looga ogaan karaa meelaha qaar. Dhirta yar ayaa badanaa loo tixgeliyaa inay tahay mid timo jaris badan oo ilaalinaysa. Dusha sare ayaa muujinaya madax badan. Guys waxay isku dari karaan noocyada kala duwan ee libdhka, sida maqaarka oo yaraada ama libdha sare leh.
Way cadahay haddii aad u baahato inaad si fiican uga fiirsato si aad u hesho cod sareeya ama hooseeya oo aadan garanayn midka si fiican kaaga shaqeyn doona, Weydii timo-jarahaaga talo.
Maqaarka oo yaraada
Nooc kale oo timo jar ah, ka sii dagaal badan oo xad dhaaf ah. Halkii laga yarayn lahaa oo lagu dhamayn lahaa timo aad u gaaban, bidaarta bidaarta leh waxay ku lug leedahay timaha ku lug lahaanshaha maqaarka. Midab beddelidda noocan ah ayaa si fiican loo arki karaa iyada oo la isku daro timo gaaban iyo kuwo dhexdhexaad ah. Timaha dhaadheer uma fiicna. Waxa kale oo lagugula talinayaa inaad yeelato timo qaro weyn oo wajiga si aad u kordhiso qaabka iyo natiijooyinka.
Buzz-ka lagu jaray dusha sare ee maqaarka sii yaraanaya ee dhinacyada ayaa leh qaab ciidan oo u eg. Khasaaraha ka soo gaadhay timahan ayaa ah in ay si dhib yar u bixiso adeegsi.
Mid kale oo ka mid ah timaha casriga ah ee ragga. Kala-goyntani waxay ku lug leedahay timaha gaaban ee dhinacyada madaxa iyo gadaasha dambe. Farqiga u dhexeeya timaha hore ayaa ah in goos gooskani yahay hal dherer oo keliya. Waa inay ku bilaabato mid aad u saraysa markay jarayso timaha korkeeda si ay u bixiso isbadal xoog leh oo u dhexeeya dhererka dherer iyo dhinacyada gaaban.
Nooca ugu caamsan ee noocan ah timaha ayaa ah dhabarka hoose ee toosan. Iyada oo ay taasi jirto, dad badani waxay isku daraan qaabab kale oo dusha sare ah, sida qaar timaha qasan iyo qaar timaha qaabaysan ah. Goyntaani waxay ku bilaabatay sidii hipster aad u adag, laakiin waxay noqotay mid lagu garaaco timajarayaasha.
Baangado qoraal ah
Wareegyada marka la eego timaha casriga ah ee ragga ayaa maraya qulqulo. Hal sano ayay ku jiraan moodle iyo mid kale ma aha. Sannadkan 2018, jajabka qaabdhismeedka ayaa si aad ah moodada u leh ragga leh timo jilicsan. Sababtuna waa Timaha oo ruxruxsan iyo curly way adkaan karaan in la maareeyo
Haddii kale, ku darista daraf gaaban muuqaalkaaga waxay noqon kartaa hab fudud oo lagu beddelo goyntaada. Haddii aad rabto baangado xagal leh si ay u muujiso muuqaalka ama midabka timahaaga, ama biqil cad oo wajigaaga lagu dhejiyo, timahaani waxay ku habboonaan karaan ninba muuqaalkiisa.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkan iyo timahaan aad ku dooran karto midka ku habboon qaabkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Timaha casriga ah ee ragga